मस्तिष्क - शान्के केमिकलमा नयाँ शक्तिशाली नूट्रोपिक कोलोरासिटामको स्वास्थ्य लाभहरूको समीक्षा।
मस्तिष्कमा नयाँ शक्तिशाली Nootropic कोलोरासिटाम को स्वास्थ्य लाभ को एक समीक्षा
कोलोराकुमम BCI-540० वा २- (२-oxopyrrolidin-१-yl) -N- (२, d-dimethyl-,,,,,, t-tetrahydrofuro2,--b quinolin-2-yl) एसिटोमाइड पनि भनिन्छ MKC-1 को रूपमा चिनिन्छ। कोलोरासिटाम रेसटम परिवारबाट एक नयाँ सिंथेटिक नूट्रोपिक हो, यद्यपि मेमोरी र सामान्य संज्ञानात्मक कार्यलाई बृद्धि गर्न यो एक बलियो नूट्रोपिक कम्पाउन्ड हो।
कोलोरासिटाम अनिवार्य रूपमा, एक आहार हो पूरै piracetam बाट प्राप्त। कोल्युरासेटम पहिलो पटक मित्सुबिशी तानाब फार्मा कर्पोरेशनले २०० developed मा विकसित गरेको थियो। तिनीहरूले यसलाई अल्जाइमर रोगको सम्भावित उपचारको रूपमा विकसित गरे। यद्यपि प्रारम्भिक परिणामहरूले केही सम्भाव्यता प्रदर्शन गरे, तिनीहरू अन्तविन्दुहरूमा पुग्न असफल भए।
पछि लाइसेन्स BrainCells Inc. मा सारियो जुन यसले प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर (MDD) र सामान्य चिन्ता डिसअर्डर (GAD) को उपचारको लागि विकसित गर्‍यो। तिनीहरू चरण २ ए क्लिनिकल अध्ययनमा पुगेका थिए जसले बिरामीहरूलाई ठूलो डिप्रेशन डिसआर्डर र चिन्ताबाट मुक्त गर्ने केही सम्भावित रिपोर्ट गरे।
दुर्भाग्यवस, ब्रेन सेल इंक। ले यसलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्न सकेन र २०१ in मा कम्पनी बन्द भयो। कोलुरसेटम २०१२ पछि लाइसेन्सको लागि उपलब्ध छ।
यी सबैको बाबजुद पनि, कोलोरासिटाम अत्यन्तै शक्तिशाली मानिन्छ nootropic मिश्रित यो सामान्यतया द्रुत-अभिनय हो किनभने यो खपतको minutes० मिनेट भित्र रगतमा धेरै उच्च तहमा पुग्न सक्छ। जे होस्, स्तर खपतको तीन घण्टा भित्र घट्छ जसको अर्थ हो कि एकले प्रयोगको तीन घण्टा भित्र अधिकतम फाइदाहरू पाउनेछ।
अन्य रेसट्याम जस्तै, कोलोरासिटामले एसिटिचोलिनको स्तर बढाउँदछ, यद्यपि यसको कार्य गर्ने संयन्त्र बाहिर छ। कोलोरासिटामले मुख्य रूपमा उच्च एफिनिटी कोलोन अपटेक (एचएसीयू) प्रक्रिया बढाउँदछ यसप्रकार कोलीनको एसिटिचोलिनमा रूपान्तरण बढ्छ। न्युरोट्रान्समिटर, एसिटाइलकोइन, संज्ञानात्मक समारोह र मेमोरीसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले न्युट्रोपिक यौगिकको रूपमा कोलोरासिटाम क्षमता।
कोलोरासिटामसँग सम्बन्धित अन्य फाइदाहरूमा दृष्टि सुधार गर्ने, समझ बढाउने र स्वतन्त्र रिकल गर्ने, मुड बढाउने, चिन्ता र उदासीनताबाट मुक्त गर्ने र शरीर सौष्ठवको लागि तत्त्व समावेश छ।
Coluracetamfट्याबलेट, क्याप्सूल वा तरलबाट फेला पर्दछ। यो मौखिक वा सूक्ष्म रूपमा लिन सकिन्छ। कोलोरासिटाम एक फ्याट-घुलनशील नूट्रोपिक हो र यसैले छिटो अवशोषणको लागि यसलाई स्वस्थ तेल / फ्याट जस्तै वर्जिन जैतूनको तेलको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
यो nootropic धेरै छोटो समय भित्र काम गर्दछ किनकि यो प्लाज्मामा उच्च स्तरमा पुग्छ प्रशासन पछि minutes० मिनेट भित्र।
कोलोरासेटम भनेको के हो?
Coluracetam एक कृत्रिम र फ्याट-घुलनशील nootropic यौगिक हो रेसटम परिवारमा। Coluracetam पनि भनिन्छ बीसीआई -१ पहिले MKC-231 को रूपमा संदर्भित थियो।
जे होस् यो एकदम नयाँ कम्पाउन्ड हो, कोलोरासिटाम नूट्रोपिक फाइदाहरू आशाजनक छन्। यो मेमोरी बृद्धि, सिक्ने, चिन्ता कम गर्ने, प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर, साथ साथै दृष्टि सुधार मा गहन लाभ प्रदान गर्न विश्वास गरिन्छ।
कार्यको कोलोरासिटाम संयन्त्र
अरू रेसट्यामजस्तै कोलोरासिटामले मस्तिष्कलाई कोलोनलाई असर गर्छ र पछि एसिटिचोलिनलाई विभिन्न तरिकाले असर गर्छ। हालसम्म गरिएको अनुसन्धानले देखायो कि दिमागमा कोलोरासिटाम प्रभावहरू तीन मुख्य संयन्त्रहरू मार्फत हुन्। कार्यका यी कोलुरसेटम संयन्त्रहरू तल विस्तृत छन्;
(1) उच्च-सम्बन्ध choline अपटेक समर्थन
Nootropics रेसटम कक्षामा जिम्मेवार रिसेप्टर्सहरूलाई उत्तेजित गरेर एसिटिचोलिनको उत्पादनको लागि प्रख्यात छ। यद्यपि कार्यको कोलोरासिटाम संयन्त्र यो अद्वितीय हो कि यसले एसिटिचोलिनको उत्पादन बढाउँछ उच्च एफेनिटी कोलोन अपटेक (HACU) लाई बढाएर।
HACU प्रणाली केन्द्रीय मोड हो जस द्वारा कोलाइन मस्तिष्कमा ढुवानी गरिन्छ। यो मूलतः एसिटिचोलिन उत्पादनको प्रक्रियामा दर-सीमित चरण हो। Acetylcholine न्युरोट्रान्समिटर मेमोरी, शिक्षा र सामान्य संज्ञानात्मक कार्यसँग सम्बन्धित छ।
कोलोराकुमम पूरक choline मस्तिष्कमा सार्न को लागी दर acetylcholine को अधिक उत्पादन को परिणाम लाई वृद्धि गर्दछ। यसले विशेष गरी CHT1 बढाउँदछ, उच्च-सम्बन्धी choline ट्रान्सपोर्टर, यसैले uptake को लागि choline को उच्च उपलब्धतामा नेतृत्व गर्दछ।
एचएसीयू ब्रेकडाउनको मामलामा, मस्तिष्क कुहिरो प्रभावको रूपमा वर्णन गरेको र मेमोरी र सिक्ने सवालमा एकले अनुभव गर्दछ। कोलोरासिटामले रक्त प्लाज्मामा कोलोनको स्तर चाखलाग्दो बनाउँदछ जसले एचएसीयू प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी ढ work्गले काम गर्न मद्दत गर्दछ, केही न्यूरन्स बिग्रेको भए पनि।
न्यूरन्समा बढेको एसिटाइलकोइन उत्पादनले छोटो र लामो अवधिको मेमोरी, सिकाई, साथै राम्रो निर्णय क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
(2) AMPA क्षमता सुधार गर्दै
अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि कोलोरासिटामले अल्फा-एमिनो---हाइड्रोक्सी---मिथाइल---आइक्सोकाजोल प्रोपियोनिक एसिड (एएमपीए) क्षमता बढाउन सक्छ। AMPA रिसेप्टर्सहरू ग्लूटामेटबाट प्रभावित हुन्छन् जसले फलस्वरूप दीर्घ-अवधि पॉन्टिएनेसन (LTP) लाई असर गर्दछ जुन सिक्ने र मेमोरीको लागि आधार बन्छ।
हाल, सेरोटोनिन सेलेक्टिव रिअपटेक इन्हिबिटर (एसएसआरआई) मुड डिसअर्डर र डिप्रेसनको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि हुन्। यि एसएसआरआईले तथापि, उसले दिमागमा सेरोटोनिनको स्तरलाई असर गर्छ जसले धेरै प्रतिकूल साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँछ।
कोलोरासिटाम ग्लूटामेट गतिविधि बढाउँदै डिप्रेशन डिसआर्डर र चिन्ताको उपचारको रूपमा काम आउँदछ त्यसैले कुनै पनि सेरोटोनिन सम्बन्धित प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्दैन।
(3) ग्लुटामेट विषाक्तताको हानिबाट एनएमडीए रिसेप्टर्सलाई जोगाउँदै
कार्यको अर्को सम्भावित कोलोरासिटाम संयन्त्र भनेको ग्लुटामेट विषाक्तताबाट N-Methyl-D-aspartate (NMDA) रिसेप्टर्सलाई बचाउने क्षमता हो। एनएमडीए रिसेप्टर ग्लुटामेट रिसेप्टर हो र स्नायु कोशिकामा हुने आयोन च्यानल प्रोटीन। सिन्याप्टिक प्लास्टिसिटी र मेमोरी गतिविधि नियन्त्रण गर्न एनएमडीए रिसेप्टरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
एनएमडीए रिसेप्टर्सलाई हुने क्षतिको प्रमुख मस्तिष्क विकारहरू जस्तै स्ट्रोक, ट्राउमेटिक ब्रेन इट्री, अल्जाइमर रोग जस्ता अन्य मस्तिष्क रोगहरूसँग जोडिएको छ।
कोलोरासिटाम अनुसन्धानले यसलाई एक शक्तिशालीको रूपमा मान्यता दिन्छ nootropic एजेन्टले यसको प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सकारात्मक कोलोरासिटाम अनुभवको साथ जोडेको छ। कोलोरासिटाम कार्यको यसको उत्कृष्ट संयन्त्रको कारण रोमाञ्चक संज्ञानात्मक बृद्धिकर्ता हो। यद्यपि यो एउटा नयाँ कम्पाउन्ड भएकोले मानवमा थप अध्ययनको लागि ईन्स्युनेटेड कोलोरासिटाम बेनिफिटहरू निश्चित गर्न आवश्यक पर्दछ।
तल छन् coluracetam लाभ त्यो एक कोलोरासिटाम को लगातार र उचित उपयोग बाट अनुभव गर्न सक्दछ;
(1) मेमोरी र लर्नि Imp सुधार गर्नुहोस्
कोलोरासिटामले न्युरोट्रान्समिटरको उत्पादन बढाउँदछ, एसिटाइलकोलीन सिक्ने र मेमोरीसँग सम्बन्धित।
धेरै संख्याका अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि कोलोरासिटामले मुस्रेमा स्मृति र संज्ञानात्मक कार्यलाई बढावा दिन सक्छ। जहाँसम्म, अध्ययन मानव विषयहरूको साथ आयोजित गरिएको छैन तर परिणाम उस्तै हुन सक्छ।
उदाहरण को लागी, प्रेरित मेमोरी घाटा संग मुसा को एक अध्ययन मा, 1-10mg / किलोग्राम मा कोलोरासिटाम को मौखिक प्रशासन कुनै प्रतिकूल साइड इफेक्टको बिना स्मृति सुधार गर्न भेटाइएको थियो।
कोलोरासिटाम समीक्षाहरूले संकेत गर्दछ कि यसले सम्भावित रूपमा छोटो अवधि र लामो अवधिको मेमोरी बढाउँदछ।
(2) पठन समझदारी र नि: शुल्क रिकल सुधार गर्नुहोस्
कोलोराकुमम पूरक छोटो अवधिको मेमोरी सुधार गर्न सक्दछ, फोकस बृद्धि गर्न साथै नि: शुल्क रिकल। यी सम्पत्तीहरूले सिकारुहरू र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा जो कोहीलाई उनीहरूको प्रदर्शन सुधार गर्न सक्षम गर्दछ।
धेरै coluracetam अनुभवहरु व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरूद्वारा कोलोरासिटामको क्षमता प्रदर्शन गर्न अझ राम्रो बुझ्ने पढाइको साथ साथै अध्ययन गरिएको सामग्रीको निःशुल्क रिकलको माध्यमबाट प्रदर्शन बढाउन प्रदर्शन गर्दछ।
(3) दीर्घकालीन अनुभूति सुधार
कोलोरासिटामले कोलाइन अपटेक रेगुलेसन प्रणालीलाई प्रभाव पार्दछ भनिन्छ जसले गर्दा कम कोलोरासिटाम डोजको प्रशासन पछि लामो समयसम्म संज्ञानात्मक कार्यलाई बढाउँछन्।
(4) उपचार प्रतिरोधी डिप्रेसन कम गर्नुहोस्
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि कोलोरासिटाम पूरक एन्टि-डिप्रेसनन्ट प्रतिरोधी व्यक्तिहरूको लागि सम्भावित उपचार हो।
ब्रेनकेल्स इंक द्वारा चरण २ ए परीक्षण आयोजित गरीएको थियो, बिरामीहरूको एन्टि-डिप्रेसरसँग प्रतिरोधी रोगीहरूका लागि कोलोरासिटामको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नका लागि प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर (एमडीडी) र सामान्य चिन्ता डिसअर्डर (जीएडी)। प्रारम्भिक परिणामहरूले संकेत गरे कि २ura० मिग्रा / दिनमा कोलोरासेटम एमडीडी र जीएडीको बिरूद्ध प्रभावकारी थियो।
(5) सम्भावित न्यूरोजेनेसिस पदोन्नति
न्यूरोजेनेसिस मूलतः नयाँ मस्तिष्क कोषहरू द्वारा सिर्जना गरिएको प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया संज्ञानात्मक समारोह र सामान्य मस्तिष्क स्वास्थ्य दुबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
कोलोरासिटाम न्यूरोजेनेसिस प्रमोट गर्न सक्षम छ तर अंतर्निहित कार्य मोड अस्पष्ट छ। अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि यो एसिलिटोलाइन स्तर बढाउन कोलोरासिटामको क्षमता र विशेष गरी हिप्पोक्याम्पसमा सम्बन्धित हुन सक्छ।
(6) मानसिक अशक्तता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ
कोलोरासिटामले एसिटिक्लोन गतिविधि बढाउँदछ जसले मानिसहरूलाई स्किजोफ्रेनिया पीडितलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्छ जसमा एसिटिल्कोलीन संश्लेषणमा सम्मिलित इन्जाइम बिरामी हुने गर्दछ।
यसले अल्जाइमर रोग जस्ता अन्य धातु विकलांगहरूबाट बिरामी व्यक्तिहरूका लागि पनि शिक्षा सुधार गर्न सक्छ।
(7) दृष्टि सुधार गर्न सक्छ
Coluracetam एक चाखलाग्दो छ nootropic यौगिक जसले अनुभूति मात्र बढाउँदैन तर सुधारिएको र vision्ग दर्शन, राम्रो आकार मान्यता र सुधारिएको दृष्टिबाट पनि तपाईंको दृष्टि बढाउन सक्छ। यसले रेटिनाको डिजेनेरेटिव रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूमा स्नायुहरूको बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
कोलोरासिटामको प्रयोगकर्ताहरू फरक अनुभव गर्छन् कोलोरासिटाम प्रभावहरू उज्यालो र colorsहरू सहित, तीव्र कन्ट्रास्ट, आकारहरूमा तीखा फोकस र बत्तीहरू बढी उज्ज्वल हुने।
(8) इरिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम लक्षण सुधार
इरिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम (IBS) एक प्रचलित ठूलो आंतको रोग हो जुन कोलोन ट्रान्सपोर्टर १ (CHT1) को नियमनको कारण हुँदैन।
२०१ 2018 को अध्ययनले देखाउँदछ कि कोलोरासिटाम सीएचटी १ अणुलाई नियमित गर्न सक्षम गर्दछ यसैले लक्षणहरू कम गरीरहेको छ भने इरिटेल बोवेल सिन्ड्रोम।
(9) Coluracetam मनोरन्जनकारी प्रयोग
Coluracetam एक राम्रो मूड बढ़ानेवाला हो र बिस्तारै एक आराम महसुस प्रदान गर्दछ। यो वृद्धि हर्मोनहरू सक्रिय गर्न बोकेको छ यसैले शरीर सौष्ठवको लागि राम्रो हो। जे होस्, यो एक ऊर्जा बूस्टर को रूप मा संकेत गरीएको छैन र तसर्थ राम्रो परिणामको लागि एक उत्तेजकको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ।
Coluracetam Vs aniracetam, फासोरासेटम, pramiracetam र Piracetam। के फरक छ?
(१) Coluracetam बनाम Aniracetam
दुबै कोलोरासिटाम र एनिरासिटाम रेसटम परिवारसँग सम्बन्धित छ। ती दुबै बलियो नूट्रोपिक पूरकहरू हुन्। Aniracetam पहिलो पटक १ 1970 .० को दशकको सुरूमा पत्ता लागेको थियो। Aniracetam मेमोरी र मुड बृद्धि गर्न, चिन्ता र डिप्रेसन को लक्षण कम गर्न र ध्यान सुधार गर्न को लागी परिचित छ।
दुवैको रूपमा coluracetam र aniracetam तपाईको दिमागमा एसिटाइलकोलीनको स्तरलाई असर गर्दछ, ती तरीकाले फरक पार्ने तरीकाले यो। एनिरासिटामले सीधै बढी एसिटिक्लोनको रिलीज गर्न अग्रसर गर्दछ जबकि कार्यको मुख्य कोलोरासिटाम संयन्त्र उच्च एन्फिनिटी कोलाइन अपटेक प्रक्रियाको नियमनको माध्यमबाट हुन्छ जसले कोलोनको अधिक मात्रा लिन्छ र एसिटिचोलिनमा रूपान्तरण गर्दछ।
थप रूपमा, कोलोरासिटामले कन्ट्रास्ट कन्ट्रास्टतिर लैजान देखिएको छ र विवरणहरू विस्तार गर्दछ जबकि Aniracetam ले अधिक र sat संतृप्तिमा जान्छ।
यद्यपि aniracetam र coluracetam nootropics मुड इजाइनरहरू हुन्, कोलोरासिटाम aniracetam भन्दा राम्रो मुड बृद्धि गर्ने हो।
यसका साथै, केहि एनिरसेटम प्रयोगकर्ताहरूले सुधारिएको सिर्जनशीलता रिपोर्ट गर्छन्। अर्कोतर्फ कोलोरासिटामले दृष्टि सुधार गर्दछ।
(२) Coluracetam बनाम Fasoracetam
फासोरासेटम रेष्टम परिवारमा सबैभन्दा नयाँ Nootropic हो। यो बच्चामा सम्भावित उपचार वा ध्यान डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसअर्डर (ADHD) को रूपमा विकसित हुँदैछ।
कोलोरासिटाम जस्तै, फासोरासिटाम एक सम्भावित दिमाग स्वास्थ्य नूट्रोपिक हो जसले मेमोरी र सामान्य संज्ञानात्मक प्रकार्य सुधार गर्दछ। ती दुबैले कोलीन अपटेक बढाउँछन् जुन एसिटिचोलिनको संश्लेषणमा प्रयोग हुन्छ।
एक कार्यको उत्कृष्ट फासोरासेटम संयन्त्र GABAb रिसेप्टर्सहरूलाई अपग्रेट गर्ने क्षमता हो। GABA रिसेप्टर्स सीखने संग सम्बन्धित छ, शान्त प्रभावहरु जसले चिन्ता र उदासी कम गर्न र निद्रा सुधार गर्न सहयोग गर्दछ।
यी दुई nootropics धेरै समान प्रभाव हुन सक्छ। यद्यपि एक विशिष्ट विशेषता यो हो कि, कोलोरासिटामले फासोरासिटाम भन्दा उच्च दरमा एसिटिल्कोलीन उत्पादन गर्दछ। थप रूपमा, बढाउने मुडमा कोलोरासिटाम क्षमता राम्रोसँग प्रमाणित हुन्छ जबकि फासोरासिटामको पूर्ण रूपमा प्रमाणित हुँदैन।
अन्य रेसट्यामहरूमा जस्तै, फासोरासेटमलाई अल्फा GPC जस्ता राम्रो कोलोन स्रोतको साथ प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। जहाँसम्म, यो अन्य पूरकहरूको साथ स्ट्याक गर्न गाह्रो छ। चाखलाग्दो कुरा, coluracetam फासोरासेटम स्ट्याक केवल सिफारिश स्ट्याक हो।
()) Coluracetam बनाम Pramiracetam
Pramiracetam रेसटम परिवारबाट एक सबैभन्दा शक्तिशाली nootropics हो। योसँग धेरै बलियो मेमोरी बढाउने क्षमता छ। अन्य रेसट्यामहरूको विपरीत, जुन प्राय: स्वस्थ विषयहरूमा प्रयोग गरिदैन, प्रमिरसेटम स्वस्थ व्यक्तिहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कोलोरासिटाम जस्तै, pramiracetam मस्तिष्क मा न्युरोट्रान्समिटर बढ्छ। यद्यपि, कोलोरासिटाम वा अन्य रेसट्यामहरू जस्तो नभई विशिष्ट न्युरोन रिसेप्टर्सहरूलाई असर गर्छ, प्रमिरासेटमले ती सबैलाई असर गर्न सक्छ र हिप्पोक्याम्पसलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
जबकि ती दुबै स्मृतिलाई सुधार गर्न सक्दछन्, pramiracetam ले एक उत्तेजकको फाइदा पनि प्रदान गर्दछ। यद्यपि, कोलोरासिटामले चिन्ता कम गर्ने र मुड बढाउने प्रमिरसेटमबाट अतिरिक्त फाइदा पनि प्रस्ताव गर्दछ।
())। Coluracetam vs Piracetam
Piracetam पहिलो nototropic संश्लेषित गरिएको छ र rastam वर्ग मा अन्य nootropics बीच सबैभन्दा शक्तिशाली हो। Piracetam एक प्रभावशाली संज्ञानात्मक बृद्धि गर्ने प्रायः वृद्ध र संज्ञानात्मक कमीको साथ मानिसहरुको लागि हो। यद्यपि यो स्वस्थ व्यक्तिको लागि सहयोगी नहुन सक्छ।
जबकि दुबै piracetam र coluracetam दिमागमा Acetylcholine को स्तर बढाउनको लागि तिनीहरूको कार्य गर्ने मोड भिन्न छ। पाइरासिटामले एसिटिचोलिन रिसेप्टर्सलाई एसिटिचोलिन प्रति बढी संवेदनशील बनाउँदछ, जबकि, कोलोरासिटामले उच्च सम्बन्ध कोलोन अपटेक प्रक्रियालाई प्रभावित गरी कोलाइन को एसिटिचोलिनमा रूपान्तरण बढाउँदछ।
Coluracetam खुराक, स्ट्याक, पूरक
(१) कोलोरासेटम डोज
खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) कोलोरासिटाम र अन्य रेसेटम नूट्रोपिक्सलाई नयाँ अप्रमाणित औषधिहरूको रूपमा सम्मान गर्दछ र त्यसैले त्यहाँ कुनै मानक कोलोरासिटाम खुराक परिभाषित गरिएको छैन। यस अवस्थामा सिफारिस गरिएको coluracetam खुराक मानव क्लिनिकल अध्ययनबाट लिइएको हो तर दुर्भाग्यवस केवल मानव विषयहरूको साथ सीमित अनुसन्धान मात्र गरिएको छ।
ठिक छ, सबै हराएको छैन किनकि व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरूबाट धेरै कोलोरासिटाम समीक्षाहरू उपयुक्त कोलोरासिटाम खुराक प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछन्। प्रभावी खुराक प्रति दिन 5--२० मिलिग्राम बीच रहेको हुन्छ, तथापि, कोलोरासिटाम मौखिक बनाम सबलिंगुअल प्रशासन तुलना गरेर त्यसपछि खुराक समायोजित गर्न सकिन्छ।
कोलोरासिटाम मौखिक बनाम सबलिual्गुअल खुराक छनौट गर्दा, sublingual खुराक कम हुनुपर्छ। सब्लिual्गुual्गल प्रशासनले मूल रूपमा जिब्रोमुनि कोलोरासिटाम राख्नु र छाला मार्फत बिघटन गर्न समावेश गर्दछ। यसले कोलोरासिटाम नूट्रोपिकलाई सीधा रक्तप्रवाहमा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ जसले कोलोरासिटाम प्रभावहरूलाई बढाउँदछ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले दैनिक २०-- mg मिलीग्राम कोलोरासिटाम डोज रिपोर्ट गर्दछ जुन दुई खुराकमा लिन्छ, एउटा बिहान सबेरै र अर्को दिउँसो।
जे होस्, लगभग १०० मिलीग्राम दैनिक लिई तीन पटक लिइएको एक उच्च कोलोरासिटाम खुराकले ठूलो डिप्रेशन डिसआर्डर साथै सामान्य चिन्ताका विकारहरूको उपचार गर्न आवश्यक हुन्छ। दैनिक प्रशासित २ 100० मिलीग्रामसम्मको खुराक तीन पटक कुनै प्रतिकूल साइड इफेक्ट बिना परीक्षणमा प्रयोग गरिएको छ।
कुनै पनि औषधि वा आहार पूरकको रूपमा, सँधै न्यून प्रभावकारी खुराकबाट सुरू गर्नुहोस् र बिस्तारै बढि जानुहोस् जस्तो तपाईंको शरीरलाई आवश्यक पर्न सक्छ। कोलोरासिटाम राम्रो कोलोन स्रोतसँग लिनुपर्दछ कोलोन कमिहरू पूरा गर्नका लागि जुन टाउको दुखाइ हुन सक्छ।
(२) कोलोरासिटाम स्ट्याक
रेसेटमहरू र अन्य नूट्रोपिक पूरकहरूले राम्रो परिणाम दिन्छ जब उनीहरूसँग अन्य पूरकहरू स्ट्याक हुन्छन्। दिमाखाप जस्तो दिमागमा अपर्याप्त कोलाइनसँग सम्बन्धित प्रभावहरूबाट बच्न रेसट्याम्सलाई विशेष गरी राम्रो कोलोन स्रोतको साथ लिन आवश्यक पर्दछ। Coluracetam एक अपवाद छैन।
यदि तपाईं कोलोरासिटाम अल्फा जीपीसी नूट्रोपिक स्ट्याकलाई विचार गर्नुहुन्छ भने, दैनिक daily००--300०० मिलीग्रामको खुराक उचित हुन्छ अन्यथा प्रति दिन २ 600०-250० मिलीग्राम प्रति दिन सीडीपी कोलाइन प्रति १०-१० मिलीग्राम कोलोरासेटमको साथ लिन सक्दछ।
कोलुरसेटम स्ट्याक्स सहित धेरै पूरकहरू सहित, फेनिलिपिरासेटम, टिआनेप्टिन, नूपेप्ट, मोड्याफिनिल, प्रमिरासिटाम, पाइरासेटम र oxiracetam अरु माझ nootropics.
किनकि स्ट्याकिंग एकदम फराकिलो हुन सक्छ किनकि कोलोरासिटामले प्रयोगको लागि ठाउँ प्रदान गर्दछ, एक स्ट्याकलाई विचार गर्नुहोस् जसले तपाईंको संज्ञानात्मक कार्यलाई उल्लेखनीय बृद्धि गर्दछ जबकि ठूलो मानसिक र शारीरिक उर्जा उत्तेजित गर्ने साथसाथै कोलाइन अभावलाई पनि रोक्दछ। जस्तै स्ट्याकमा कोलोरासिटाम ऑक्सीरसिटाम स्ट्याक, कोलोरासिटाम समावेश छ fasoracetam अरूको बीचमा स्ट्याक।
पूर्ण कोलोरासिटाम ऑक्सीरसिटाम स्ट्याकको उदाहरण हो
२० मिलीग्राम कोलोरासिटाम - प्राथमिक संज्ञानात्मक वृद्धिकर्ता
२०० मिलीग्राम oxiracetam - कोलुरसेटमको साथ synergetic लाभ प्रदान
२०० मिलीग्राम क्याफिन- उत्तेजकको रूपमा कार्य गर्न
400 मिलीग्राम L-Theanine- विश्राम को प्रचार गर्न
300 मिलीग्राम कोलोन स्रोत जस्तै अल्फा GPC पूरक
()) कोलोरासिटाम पूरक
कोलोरासिटाम पूरक को सराय रूप को पाउन सकिन्छ कोलोरासिटाम पाउडर, तरल सामान्यतया सजीलो रूपमा सजिलैसँग लिन्छ र कोलोरासिटाम क्याप्सूलको रूपमा पनि।
त्यहाँ कसरी क्युर्यासेटम लिन सकिन्छ भन्नेका मुख्य तरिकाहरू छन् coluracetam मौखिक बनाम sublingual प्रशासन Sublingual प्रशासन मौखिक भन्दा बढी प्रभावी छ। जब पूरक जीभको मुनि राखिन्छ यो सीधा रक्तप्रवाहमा प्रवेश गर्दछ त्यसैले छिटो र सजिलो अवशोषण गर्दछ।
कोलोरासिटाम यसको प्राथमिक कार्यको लागि लोकप्रिय हो स्मृति बढाउन र सिक्नको साथसाथै अन्य लाभहरू जस्तै दृष्टि सुधार, चिन्ता र प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डरको साथसाथै इरिटेल बोवेल सिन्ड्रोमको उपचार गर्ने।
कोलोरासिटाम मुख्यतया मस्तिष्कमा एसिटाइलकोइनको स्तर बढाउँदै काम गर्दछ। कोलोरासिटाम पूरकको अर्को विकल्प कोलोन युक्त खाद्य पदार्थहरू लिनु हो, जस्तै अण्डाहरू, कलेजो, गाईको मासु र कुखुराको मासु, अरूमा ब्रोकोली।
कोलोरासिटाम को अधिक प्रयोगकर्ताहरु यसलाई एक राम्रो choline स्रोत जस्तै CDP-Choline वा Alpha-GPC कोलोरासिटाम को प्रभावहरु लाई बढाउन को लागी स्टक गर्छ र कम सम्भावित साइड इफेक्टहरु लाई बढावा दिन्छ।
कोलोरासिटाम एक फ्याट-घुलनशील नूट्रोपिक हो, यसैले राम्रो अवशोषणको लागि स्वस्थ तेल जस्तै गैरप्रसंस्कृत नरिवल तेल, वा अतिरिक्त कुंवारी ओलिभ तेलको साथ लिन आवश्यक छ।
साइड इफेक्ट र अन्तर्क्रिया
कोलोरासिटाम साइड इफेक्ट
कोलोरासिटाम एक सुरक्षित र राम्रोसँग सहनशील नूट्रोपिक यौगिक हो जुन प्रतिकूल साइड इफेक्टको कारण बिना नै प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि केही हल्कादेखि मध्यम साइड इफेक्टहरू पनि रिपोर्ट गरिएको छ। कोलोरासिटाम प्रभावहरू प्राय: जब त्यहाँ ओभरडोज हुन्छ।
यी सम्भावित कोलोरासिटाम साइड इफेक्ट समावेश;
टाउको दुख्ने: यो सबै રેસट्यामको साथ धेरै सामान्य हो भन्ने तथ्यको कारण एसिलिटोलिनमा कोलोन रूपान्तरण बढेको हो। मस्तिष्कमा अपर्याप्त कोलोन सामान्यतया दिमागको केही भागहरूमा टाउको दुख्ने गर्दछ। केही कोलोरासिटाम प्रयोगकर्ताहरूले टाउको दुखाइ रिपोर्ट गरेका छन्। यो राम्रो choline स्रोत संग stacking र खुराक कम गरी सही छ।
मस्तिष्क कुहिरो: यसको मतलब केवल ध्यान र भ्रमको अभाव हो। कोलोरासिटामका केही प्रयोगकर्ताहरूले विस्थापनको भावनाका साथै ध्यान केन्द्रित नभएको रिपोर्ट गरेका छन्। यद्यपि यो सहि खुराकमा कोलोरासिटामको लगातार प्रयोगको साथ अदृश्य हुन्छ।
मुडमा गिरावट: यो पूरक लाभहरूको विरोधाभास हो। जबकि यो एक मुड बृद्धिकर्ताको रूपमा परिचित छ कोलुरसेटम का केहि प्रयोगकर्ताहरू सुरूमा कम मुडको अनुभव गर्छन् र अधिक मात्राको साथ। भाग्यवस, खुराक कम गर्नाले सम्भावित मूड सुधार गर्नका साथै राम्रो मुड बृद्धिकर्ताको साथ यसलाई प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
मतली: जब कोलोरासिटाम ओभरडोजमा लिइन्छ एकलाई मतली अनुभव हुन सक्छ।
दिनको निन्द्रा: एक अधिक मात्रा दिन को लागी पनि तपाईंको सतर्कता को स्तर कम गर्न सक्छ।
उल्लेखित अन्य कोलोरासिटाम साइड इफेक्टहरू हुन् चिढचिढापन, चिन्ता, आत्मघाती विचारहरू, र केहि रात निद्रा गडबडी।
शुभ समाचार यो हो कि यी सबै कोलोरासिटाम प्रभावहरू टालिन सकिन्छ;
एक choline स्रोत संग यसको प्रयोग,
सिफारिश गरिएको खुराक प्रयोग गरेर,
बिहान र दिउँसो पूरक लिदै,
पर्याप्त पानी लिदै।
केही coluracetam अन्तर्क्रिया रिपोर्ट गरिएको छ र यसैले यो पूरकको बारेमा विचार गर्ने क्रममा धेरै होशियार हुनुपर्दछ। तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्न अत्यधिक सल्लाह छ कि तपाइँ कुनै ड्रग अन्तरक्रिया मा सूचित र तपाइँको आहार पूरक को छनौटहरु मा।
तल केहि कुराकानीहरू छन्;
कोलोरासिटामले एन्टिकोलिनर्जिक औषधिहरूको प्रभावकारितामा बाधा लिन सक्छ, जस्तै पार्किन्सनको औषधी, बेनाड्रिल, र केहि एन्टिसाइकोटिक्स।
कोलोरासिटाम एक कोलिनेर्जिक पूरक हो र यसले कोलिनेर्जिक ड्रग्सको प्रभाव बढाउन सक्छ, जस्तै अल्जाइमर र ग्लुकोमा ड्रग्स।
यसले एनएमडीए रिसेप्टर ड्रग्सलाई पनि असर गर्न सक्छ, जस्तै खोकीको औषधि र एनेस्थेटिक्स।
क्लिनिकल अनुसन्धान र प्रयोगकर्ता अनुभव
कोलोरासिटाम क्लिनिकल अनुसन्धान
कोलोरासिटाम सम्बन्धी मानव क्लिनिकल परीक्षण ब्रेन सेल्स इंक द्वारा संचालित एउटा परीक्षणमा सीमित छ। अध्ययनमा १०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर र सामान्य चिंताका साथ ग्रस्त छन्। प्रारम्भिक परिणामहरूले सुझाव दिन्छ कि कोलोरासिटामसँग केहि सम्भाव्यता रहेको थियो, तथापि उनीहरूले पूरकको विकास गरेनन।
कोलोरासिटाम सीमित मानव अध्ययनको साथ एक नयाँ नयाँ nootropic यौगिक भएता पनि केही व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरूले केही फाइदाहरूको साथसाथ साइड इफेक्टहरू पनि रिपोर्ट गर्छन्। रिपोर्ट गरिएका केही कोलोरासिटाम अनुभवहरू हुन्;
बुड गरिएको मुड
सुधारिएको दृश्य कल्पना
विस्तारित पठन समझ र नि: शुल्क सम्झना
यद्यपि, केहि coluracetam समीक्षा केहि साइड इफेक्ट प्रकट गर्नुहोस्:
अवरोध रात निद्रा
माथिको कोलोरासिटाम प्रभावहरूको वैज्ञानिक ब्याक-अपको अभावले गर्दा हामी तपाईंलाई पूरक आहार लिनु अघि आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिन सल्लाह दिन्छौं।
कोलोरासिटाम को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
कोलुरसेटम पाउडर वा समाधान सबैको लागि राम्रो छ जो यसको विभिन्न लाभहरू लिन चाहन्छन्। यद्यपि पार्किन्सन रोग जस्ता केही मेडिकल मुद्दाहरूका मानिस र गर्भवती महिलाहरूलाई पनि यो पूरक प्रयोग नगर्न सल्लाह दिइन्छ।
उमेर र स्किजोफ्रेनिया र अल्जाइमरको बिरामी जस्ता अन्य स्मृति-अभावका कारणहरूका बिरामी जस्ता कारणहरूका कारण स्मृतिको कमीबाट पीडित व्यक्तिहरू, कोलोरासिटाम पूरकबाट लाभ लिन सक्दछन्।
कोलोरासिटाम पाउडर चिन्ता र उदासिनताबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त छ किनकि यो मुड र तर्क गर्न क्षमतालाई बढावा दिन सक्षम छ। यस कोलोरासिटामले मस्तिष्कमा एसिटाइलकोइन बढाउँदछ, जसले मेमोरी र फोकस बढाउँदछ। कोलोरासिटाम चिन्ताको लागि राम्रो विकल्प हो।
दृश्य सुधार गर्न चाहने व्यक्तिको लागि पनि कोलोरासिटाम राम्रो पूरक हो। यो पूरकले एक लाई दृष्टि वृद्धि, स्पष्ट कन्ट्रास्ट र लाइट उज्यालो बन्न अझ स्पष्ट रूपमा हेर्न मद्दत गर्दछ। बिग्रेको रेटिना र अप्टिकल नर्भहरूको मर्मत बढाउन यसमा थप देखिएको छ।
कोलोरासिटाम पाउडर वा यसको तरल फारम विद्यार्थीहरूको लागि उत्कृष्ट पूरक हो। यो बोध र नि: शुल्क कललाई बढावा दिन सक्षम छ त्यसैले सम्भावित प्रदर्शन सुधार गर्न सक्छ।
बॉडीबिल्डर्स छोड्दैन किनकि यो पूरकले मनोरन्जन गतिविधिमा मद्दत गर्दछ कि आराम र बडीबिल्डि enhance बढाउने।
कोलोरासेटम कहाँ किन्ने?
कोलुरसेटम बिक्रीको लागि सजिलै अनलाइन उपलब्ध छ। यदि तपाईं बिक्रीको लागि वा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि कोलोरासिटाम खरीद गर्ने विचार गर्नुहुन्छ भने, सम्मानित विक्रेताहरू अनलाइन ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस्। किनकि यो पर्याप्त नयाँ पूरक होईन धेरै कम्पनीहरूले बिक्रीको लागि कोलोरासिटाम प्रदान गरिरहेका छैनन त्यसैले उपलब्ध विकल्पहरूबाट सजिलैसँग छनौट गर्न सक्दछन्।
कोलोरासिटाम रेसटम परिवारको एक नयाँ सदस्य हो र यसले संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्ने क्षमताको साथै दृष्टि सुधार गर्ने क्षमताका कारण लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ।
कार्यको मुख्य कोलोरासिटाम संयन्त्र उच्च affolity choline uptake (HACU) प्रक्रियालाई प्रभाव पार्नु हो। यसले यसलाई अन्य रेसटमको बीचमा अद्वितीय र उत्कृष्ट बनाउँदछ किनभने केवल फेनिलपिरसेटमसँग मिल्दोजुल्दो संयन्त्र छ।
कुराको तथ्य यो हो कि हाम्रो शरीरले प्राकृतिक रूपमा कोलोरासेटम बनाउँदैन। तसर्थ, यदि एकले कोलोरासिटाम बेनिफिटको अनुभव गर्नुपर्‍यो भने यो पूरकबाट आउनु पर्छ।
जे होस्, सीमित मानवीय परीक्षणहरू मात्र फाईदाको सम्बन्धमा कागजात गरिएको छ, राम्रो संख्यामा व्यक्तिले यसलाई पहिल्यै प्रयास गरिसकेका छन् र केही फाइदाहरू रिपोर्ट गरेका छन्।
कोलोरासिटाम डिप्रेसनको लागि र चिन्ता क्लिनिकल परीक्षणमा रिपोर्ट गरिएको छ र यसले लाभहरू पुष्टि गर्न थप अध्ययनका लागि राम्रो उम्मेदवार बनाउँछ।
यस अनुपूरकको साथ सीमित मानवीय अध्ययनको कारण, सम्भावित साइड इफेक्टहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छैन, तथापि, रेसट्यामको साथ टाउको दुखाइ सामान्य समस्या हो।
कोलोरासिटामलाई कोलोन स्रोतसँग स्ट्याकिंग गर्न कोलिन घाटाहरू जस्तै टाउको दुख्नेमा हुने असरहरूको अफसेट गर्न सल्लाह दिइन्छ। यस्तो स्ट्याक समावेश छ coluracetam अल्फा GPC स्ट्याक र कोलोरासिटाम सीडीसी कोलाइन स्ट्याक।
कोलोरासिटाम एक फ्याट-घुलनशील कम्पाउन्ड हो त्यसैले कोषहरूमा सजिलैसँग अवशोषणको लागि यसलाई स्वस्थ फ्याट / तेलसँग लिनुपर्दछ अप्सरेस्टेड नारियल तेल, वा अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेल।
Coluracetam अन्य ratam र राम्रो संग स्ट्याक्स अन्य पूरक। त्यस्ता कोलोरासिटाम स्ट्याकको उदाहरणहरू कोलोरासिटाम ऑक्सीरसेटम स्ट्याक र कोलोरासिटाम फासोरासिटम स्टेक हुन्। यसले कोलोरासिटाम र अन्य उत्पादनहरूमा थप अनुसन्धानको लागि अवसर प्रदान गर्दछ। Noopept को साथ कोलोरासिटाम मेमोरी र संज्ञानात्मक समारोह वृद्धि गर्न को लागी एक synergistic संयोजन हुन सक्छ।
थप रूपमा, कोलोरासिटामले अन्य रेसटमको साथ एसिटाइलकोलीनको मात्रा बढाउँदछ जबकि एक गिरावट कोलाइन अनुभवी हुन्छ। यसले स्ट्याकिंग कोलोरासिटामलाई राम्रो कोलोन स्रोतको रूपमा बनाउँदछ जस्तै कोलोरासिटाम अल्फा GPC स्ट्याक।
सीमित नैदानिक ​​परीक्षणहरू कोलोरासिटाम बेनिफिटहरूको पुष्टि गर्नका लागि अवस्थित छन् यसबाहेक धेरै व्यक्तिगत कोलोरासिटाम अनुभवहरूले सम्भावित फाइदाहरू सुझाव दिन्छन्। यसले देखाउँदछ कि यी सुविधाहरूको पुष्टि गर्न थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
BrainCells Inc. बन्द भएको छ त्यसैले कोलोरासिटाम थप क्लिनिकल परीक्षणहरूको लागि लाइसेन्सको लागि खुला छ।
अन्य ड्रगहरूसँग कोलोरासिटाम अन्तर्क्रिया पनि एक क्षेत्र हो जुन थप अध्ययनको आवश्यक पर्दछ।
अकाईके ए, एट अल। (१ 1998 231।) MKC-XNUMX को संरक्षणात्मक प्रभाव, एक उपन्यास उच्च एफ़िनिटी choline अपटेक बढ़ोतरी, संस्कृति cortical न्यूरॉन्स मा ग्लुटामेट cytotoxicity मा। Jpn J फार्माकोल.
बेसोहो, टी।, ताकाशिना, के।, टाबाटा, आर। ओहशिमा, सी। चाकी, एच।, यामाबे, एच, एगावा, एम। उपन्यास उच्च प्रभाव choline अपटेक वृद्धि 1996- (2-oxopyrrolidin-2-yl) को प्रभाव -N- (२,1-dimethyl-2,3-tetrahydrofuro [२,5,6,7,8-बी] क्विनोलिन-2,3- yl) मुसामा पानी भूलभुलैया सिक्ने को अभावमा acetoamide। अर्ज्नेमिट्टेल-फोर्सचung्ग, 46(4), 369-373।
मुराई, एस, सायटो, एच। अबे, ई।, मसुदा, वाई, ओडाशिमा, जे।, र इटोह, टी। (१ 1994 XNUMX))। MKC-231, एक choline अपटेक बृद्धि गर्ने, काम गर्ने मेमोरी घाटा amelioates र चूहों मा Ethylcholine Aziridinium आयन द्वारा प्रेरित हिप्पोकैम्पेल acetylcholine घटायो। न्यूरोल ट्रान्समिशनको जर्नल, (((१), १-१–।doi: 10.1007 / bf01277590।
शिरायामा, वाई, यामामोटो, ए, निशिमुरा, टी।, कटायामा, एस, र कावाहारा, आर। (२००)) कोलोन अपटेक बृद्धि गर्ने एमकेसी २ 2007१ लाई पछिल्लो एक्सपोजरले फेन्साइक्लिडिन-प्रेरित व्यवहार घाटा र मुसामा सेप्टल कोलिनेर्जिक न्यूरन्सलाई घटाउँछ। यूरोपीय न्युरोप्सीचोर्मोलोजी, १ (()), –१–-–231। https://doi.org/17/j.euroneuro.9।
ब्रेनसेल इंक। अन्वेषण फेज २ ए ट्रायल बीसीआई-2० संग्रहित नोभेम्बर २१, २०११, वेब्याक मेशिनमा परिणाम घोषणा गर्दछ।
RAW COLURACETAM POWDER (१135463-81१-))
२. कोलुरसेटम भनेको के हो?
Col. कार्यको कोलोरासेटम संयन्त्र
The. कोलोरासिटामका फाइदाहरू
Col.कलोरासेटम Vs aniracetam, फासोरासेटम, pramiracetam र piracetam। के फरक छ?
Col.कलोरासेटम डोज, स्ट्याक, पूरक
S. साइड प्रभाव र अन्तर्क्रिया
8. क्लिनिकल अनुसन्धान र प्रयोगकर्ता अनुभव
Col। कोलोरासेटम को उपयोग गर्न सकिन्छ?
१०. कहाँ कोलोरासेटम किन्न?